PunchTab: Nkwụghachi ụgwọ mmekọrịta ọha na eze na iguzosi ike n'ihe nye saịtị ọ bụla | Martech Zone
Fraịde, Septemba 2, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Izu ole na ole gara aga, anọ m na-anwale ikpo okwu ọhụrụ akpọrọ PunchTab. Site PunchTab saịtị:
PunchTab bụ ikpo okwu izizi nke ụwa nke na-enye ndị nwe webụsaịtị (gụnyere ndị na-ede blọgụ), ndị mmepe ngwa na ụdị iji mepụta mmemme iguzosi ike n'ihe na mmekọrịta mkpanaka n'efu na nkeji. Anyị nwere ngwaahịa abụọ ama ama taa, nke abụọ anaghị akwụ ụgwọ iji:
Mmemme iguzosi ike n'ihe na-aga n'ihu nke ị nwere ike iji gbaa ndị ọrụ gị ume ileta kwa ụbọchị, kesaa ọdịnaya gị na netwọkụ mmekọrịta ma hapụ nkọwa (anyị nwekwara ngwa mmepe na-enye gị ohere itinye ụzọ omenala iji nweta akara). Ndị ọrụ ga-enweta isi okwu kwa ụbọchị maka omume ha ma nwee ike ịgbapụta ụgwọ ọrụ site na katalọgụ a kara aka mgbe ha nwetara akara zuru oke.
Otu oge inye nkwado wijetị nke na-agba ndị ọrụ gị ume ịgbasa ozi gbasara saịtị gị iji gbanye ndenye n'ime ihe nrite.
Ihe dị ịtụnanya banyere ikpo okwu bụ na ọ dị mfe iji yana ọrụ onwe onye. Punchtab na-enye ohere ka onye na-ere ahịa nwee ike ịtọlite ​​usoro ụgwọ ọrụ na mmekọrịta ọ bụla na ika… site na Retweets, ka Facebook masịrị gị, na ndebanye aha Email. PunchTab ejirila ihe karịrị 1,000 inye ego na ọnwa 3 gara aga - gụnyere nke Tim Ferris, MahaloGaming na CrunchGear nwere. Onye kasị ukwuu n'ime ha bụ Vyrso.com, natara ihe karịrị 100,000 ntinye na 9,500 Facebook Fans na ụbọchị 30!
Ndi ahia ahia ahia ahia na ndi nwe ahia mara na otutu ihe a gha enweta n ’oganihu ga abia site na mmeghari ndi ozo, azuma ahia, na ndumodu nke ndi ahia i meriri. PunchTab na-enye otu ikpo okwu nke na-eme ndị ahịa a n'ụzọ zuru oke n'akụkụ ọ bụla: ntanetị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, offline, mobile na e-azụmahịa. Onye isi na Onye guzobere Ranjith Kumaran
Nsonaazụ dị oke mma:
E nwere ihe karịrị 1600 saịtị na-agba ọsọ iguzosi ike n'ihe omume iji PunchTab
Saịtị ndị a na-enye PunchTab iru ndị ahịa 6MM (nke pụtara na ndị mmadụ 6MM pụrụ iche ahụla mmemme iguzosi ike n'ihe nke PunchTab kwadoro)
Nnukwu saịtị na netwọk PunchTab na-ahụ ikwughachi aka nke 50% -100% si “ndị otu”Karịrị nkezi ọrụ. Nke a, n'ezie, gụnyere ụfọdụ nhọrọ onwe onye dịka ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike nwere ike ịbụ ndị otu. Akụkụ dị mkpa bụ na ugbu a saịtị ndị ahụ achọpụtala ma nye ha ngwaọrụ ndị a na-eme ihe iji kpọbata ọtụtụ mmadụ na ndị ọzọ site na PunchTab.
Saịtị na-ahụkwa n'etiti 15% gaa na 35% na-ebuli ọrụ mmekọrịta (mgbidi posts, ịkekọrịta, tweeting)
Iwebata Nkata gị na saịtị na 5 Nkeji
Mar 24, 2012 na 1: 07 PM
Ọ na-adọrọ mmasị nke ukwuu, n'ihi na ọ ga-eri ahụ riri ahụ ịme ụfọdụ ọrụ (tweet, mmasị ma ọ bụ + 1) iji nweta ụgwọ ọrụ.
Apr 6, 2012 na 1: 38 PM
M tinyere ya na ebe nrụọrụ weebụ m, ma tinye ya na ogwe ngwaọrụ wibiya. N'ihi ụfọdụ ihe, facebook twitter na google bọtịnụ anaghị enye ụgwọ ọrụ ugbu a, ndị na - agụ akwụkwọ m na - enweta isi naanị maka ịga na ịza ajụjụ. Agwara m PunchTab nsogbu ahụ ma ha kwuru na ha ga-eleba ya anya.
Ka o sina dị, nke a bụ nkwụnye ihe ịtụnanya nke nwere ike inye ndị mmadụ ihe nkwado iji mepụta akụkọ, wee nweta ụgwọ ọrụ. Na maka blọọgụ / weebụsaịtị, nke a bụ ihe kachasị mma!
Jul 10, 2012 na 8:38 PM
Ngwaọrụ egosighi na ibe facebook m